Noocyada tufaaxa ee hore | December 2019
Ugu Weyn Ee Noocyada tufaaxa ee hore
Noocyada Hore ee Tufaaxyada: sifooyinka, dhadhanka, faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada
Tufaaxa waxaa loogu yeeraa vitamin qiimaha dhulka. Waxay ku jiraan xaddi badan oo fiitamiin ah iyo walxaha raadraaca lagama maarmaanka u ah waxqabadka jidhka. Miraha waa ilaha ugu muhiimsan ee birta, potassium iyo kalsiyum, waxay saameyn togan ku leedahay shaqada mashiinka dheef-shiidka, wadnaha iyo xididdada dhiigga, wuxuu leeyahay saameyn tonic ah on maqaarka.
Apple kala duwan "Dream": faa'iidooyinka iyo faa'iido darrada, abuurista iyo daryeelka
Maanta, wax tufaax ah ma sameyn karo iyada oo aan lahayn tufaax. Dhaqanka Tani waa naqaan annaga, lagu sharaxay fanka, sheeko jilicsan, epic iyo heeso. Tufaaxa ciyaalkayagu waa caan iyo baahida, waxay jecel yihiin labadaba cusub, iyo noocyo qasacadaysan ama diyaargaroow kale. Taariikhda noocyada tufaaxa ee curyaaminta "Duco" Dhulkeena ma aha mid qabow iyo marmarka qaarkood oo daran, sababtoo ah caleemaha ayaa si joogto ah u hagaajiya dalagyada miraha iyo miraha, keena noocyo badan oo adkaysi u ah xaaladaha cimilada ee gobolka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Noocyada tufaaxa ee hore 2019